NUQAANFACHIISTAN: Waan baayyee nama qaanfachiisuuf…..Oromoo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNUQAANFACHIISTAN: Waan baayyee nama qaanfachiisuuf…..Oromoo
#NUQAANFACHIISTAN: Waan baayyee nama qaanfachiisuuf waan baayyee mataa oromoo gadi cabsu keessaa,
1ffaa MIIDIIYAA OROMOO jechuudhaan #OBN yoo oromoottii maxxansan dhugumattii nama saalfachiisa.
Sababbiin kana jedheefis oromoon Saba hayyuu ta’uu ragaa qabatamaa wajjiin ragaayeefii taa’ee otuu jiruu, hojiifii namootnii OBN irratti oromoo jechuun dhiheefaman doofaafii wallaalaa jaarraa qaroominnaa kana keessattii ni argaman jennee hin amannee argina.
maateriyaallii miidiyichii qabu akka ETHIOPIATTI miidiyaan biroo Kan hin qabnee ta’ee otuu jiruu, dandeeytiif muuxannoo dhabuu irraa QULQULLINNII ISAA miidiyaa biyyattii keessattii argamu irraa Isa sadarkaa dhumaa irrattii argamuudha. Miidiyaa silaa Maqaa Saba kanaa dhahachuun Saba kana saalfiichiisu ta’uu hin qabuu tureeyyuu. Walumaa galattii #OBN miidiiyaa Sabaan faallaa , Gaafa sabnii miidhamu, miidiyaa misooma odeessuu. Bakka hayyuun saba kanaaf dubbattu irraa dheessa. Lafa gantuun Saba arrabsituu arge caccabee simata.
#obn miidiiyaa Saba irratti duuluu , sagalee uummattaa yeroo jedhaniin dhuguma baayyee nama qaanfachiisa.
2ffaa,,,BULCHIINSA MOOTTUUMMAA NAANNOO OROMIYAA….
Dhugumattii MNO ti, jechuun namoota akka Amma moottuummaan oromoof oromiyaa irrattii fe’amee jiruun , Maqaa uummata oromoo uummata hayyuu miliyeena 60 olii kanattii maxxansanii Saba hayyuun meeqa adunyaa irrattii leellifamuun iddoo gurguddaa irra kaayyamanii jiraniitti, Saba hayyuun meeqa biyyuma keessa jiraniitti , warra akka Amma bulchaa jiraniitti yaammamuun baayyee nama saalfachiisa..
3ffaa, SABA ofii duroomee, adunyaayyuu sooruu danda’u, sababa bulchitoota wallaloo irrattii fe’amaniin saamamee, lafa fii qabeenya isaa harkaa fidhatamee, hojiifii daldala keessaa dhiibamee, Saba rakkattaa ta’ee yoo himamuu baayyee nama qaanfachiisa.
4ffaa, Saba baldhaan Kun tuuffatamee, gaafiin eenyuummaa isaa awaalamuun bara baraa ajjeechaaf hidhaan keessummeefamuun baayyee nama qaanfachiisa.
5ffaa,ABIY AHMAD ITHIOPIYAA bulchaa jira yeroo jedhamuu baayyee nama qaanfachiisa.
Saba gootaaf hayyuu irraa dhalannee , biyyaaf qabeenya keenya hundaa tikfannee, eenyuummaa keenya qabannee, Kan nu saamuuf nu dhiibuuf deemu hundaa injifannee,
Dhiigaaf Lafee gootota keenyaatiin OROMOO taanee , OROMIYAA teenya irratti jiraachuun keenya #nuboonsa. Kolkollee muraasaan wallaluummaaf doofummaa bitamanii Saba irratti duuluun gootota keenya dhiisanii diina Dhiiga gootota keenyaa lolaasaa Turan MILILIKIIN faarsaniin alatti sabboontootaaf hayyoota MILIYEENA 50 ol qabaachuun keenya #NU_BOONSA..
TVn Boqqolloo Kaadiree Bilxiginnaa kan Diyaasfooraa Simate.
Ajjechaan Ajajaa police Oromia Solomon Taaddasee fi Wayillan isaa irratti guyyaa har’a osoo isaan nyaata nyaatanii Buraayyuutti tahee adda durummaan kan raawate
1. #Taye #Dandea #Aredo
2. #Dammallash #Gabramika‘el ajajaa police federaala akka tahe madda qabatamaa irra na dhaqqabee.
Innis akkas ture
Wal qoccolloon Taye Dandea fi Komander Solomoon jiddu turee bubbuleera. Wal dhabdee isaanii jabaatee kan jalqabe yeroo Waajjirri ABO Buraayyuutti banamee ture.
#Taye #Dandea Buraayyuutti ABO waajjira akka hin bananne yoo baate ammoo Ummatni bahee akka hin eebbisiisne ugguramu qaba jedhe commander #Solomonitti bilbilee hime.
Commander Solomoon #Taye #Dandea dhaan Seeraan hojjenna yoo tahee Seerrii paartiilee siyaasa karaa nagaa socho’an maraaf qixa dalaga waan taheef Ugguramuu hin qaban, rakkoon yoo jiraateef Polisiin ramadamee eegama jechuun Taye Dandeaf deebii kenne.
Tayen aariidhaan Baajata poliisii isaan eeguuf baastu kiisha kee keessa baasta yoo tahee haa tahu garuu Mootummaan isaan eeguudhaaf baajata ramadu hin qabu jechuun itti deebise.
Commander Solomoon deebisuun Baajatni isaanif jecha addatti ramadamu hin jiru, poliisiin hojii idilee isaa hojjechuuf bobbaa’a, nageenya ummata eeguun ammoo gahee poliisiiti.
Kanaaf nageenya eeguuf eegsiisuun gahee keenya qaama biraa waan galchuu hin qabu jechuun Taye Dandea afaan qabsiisee.
Isa booda Taye Dandea aariidhaan gara ajajaa police federaala Dammallash Gabramika’elitti bilbilee wal dhibdee isaanii itti himuun akka Polisiin federaala jidduu galuu itti hime.
Isa booda Dammallash Gabramika’el, Commander Solomoon Taddasetti bilbiluun waan ajajamtee ni raawwatta moo hin raawwattu jechuun dorsiisuu barbaade, Solomoon, akka jedhe
Maalan ajajamee didee?
Eenyutus naa ajajee?
Siinis dhimma police Oromia keessa maaltu sii galche?
Dammallash Gabramika’el deebisuun yoo ati ajaja sitti kenname hin raawatiin nageenya Ummataa eeguuf jecha jidduu seenna jedhen
Commander Solomonis deebisee erga tahee qaama atii ajajjuus ibidda baata Policiin Oromiyaas ibidda baata waan taheef osoo gahee hojii kee beekte gaariidha jechuun karuma bagaa deebiseef.
Erga gaafa sanaa jalqabee Commander Solomoon garee Taye Dandea Aredo fi Dammallash Gabramika’eliin adamfamaa turuu isaa hiriyyootni isaa danuun quba qabu.
Ammas KFO Buraayyuutti ummata waliin mari’achuuf beellama qabatanii jiru. Kana Commander Solomoontu akka isaan Ummata mariisiisaniif haala mijeessa jiraachu Taye Dandea ni beeka.
Kanaf sochii Dhaabilee siyaasa Oromoo naannoo kanatti tahuu uggursiisuuf daandii isaan qaban tokkicha Commander Solomoonin ajjeesuu waan taheef, Taye Dandea Aredo fi Dammallash Gabramika’el nama hordofsiisanii ajjeesan.
Hiriyyaa Solomoon irraati.
Imiimmaan Hin Qoorre